YG Entertainment ကနေ ထွက်ခွာသွားတော့မယ့်အကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တဲ့ 'ဝမ်း' (ဂျောင်ဂျေဝန်) - Lifestyle Myanmar
Home Celebrity YG Entertainment ကနေ ထွက်ခွာသွားတော့မယ့်အကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တဲ့ ‘ဝမ်း’ (ဂျောင်ဂျေဝန်)
YG Entertainment ကနေ ထွက်ခွာသွားတော့မယ့်အကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တဲ့ ‘ဝမ်း’ (ဂျောင်ဂျေဝန်)
Her Private Life ဒရမ်မာကားမှာ နာမည်ကြီး အဆိုတော် တစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ကောင်ချောချောလေးကို မှတ်မိကြမှာပါနော်။ သူ့ကို အများက ‘ဝမ်း’လို့သိကြပါတယ်။ Jung Jae Won ဆိုတဲ့ နာမည်အရင်းဖြင့် သရုပ်ဆောင်လောကကို ဝင်လာတဲ့ ‘ဝမ်း’ဟာ သူ့ရဲ့ ‘Goodbye Summer ‘ရုပ်ရှင်ကား ပရိုမိုးရှင်းအတွက် အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ YG Entertainmen ကနေ ထွက်ခွာသွားတော့မှာဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အင်တာဗျူးစဉ်မှာ YG Entertainmen ကနေ ထွက်ခွာမယ့်အကြောင်းကို ယခုလို အသေးစိတ် ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
” ‘Her Private Life’ ဒရမ်မာကားပြီးတဲ့နောက်မှာ YG Entertainment နှင့်အတူ ကျွန်တော် လမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။ YG ကိုပူးပေါင်းခဲ့တုန်းက ကျွန်တော် ကိုယ်ပိုင်ဂီတအပေါ်မှာပဲ အာရုံစိုက်ချင်ခဲ့တာပါ။ လူတွေအများကြီးကို ကျွန်တော်ရဲ့ ဂီတတွေ မျှဝေနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ခဲ့မိတာပါ။ အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်း ဂီတဖန်တီးရင် ဖြန့်ချီဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲပါတယ်။
ခုချိန်မှာ ကျွန်တော်ဂီတအပေါ်ကိုပဲ အာရုံစိုက်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဘယ်တော့ ဖြန့်ချီမလဲ ဆိုတာတော့ ကျွန်တော် တိတိကျကျ အဖြေမပေးနိုင်သေးပါဘူး။ တတ်နိုင်သလောက် ဂီတအပေါ် အလုပ်လုပ်သွားမှာပါ။ ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက်က ဒီနှစ်မှာ ဖြန့်ချိဖို့ ဖြစ်ပါတယ်”လို့ ဝမ်းက ပြောပါတယ်။
ဝမ်းဟာ သူ့ရဲ့ ဂီတအသစ်ကို ဖြန့်ချိတဲ့အခါ အကူအညီဖြစ်ဖို့ ကိုယ်ပိုင် တစ်ကိုယ်တော် အေဂျင်စီထောင်မှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဝမ်းဟာ YG Entertainment နှင့် ပူးပေါင်းကတည်းက သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ 2017 ဇူလိုင်မှာ တစ်ကိုယ်တော် အယ်လ်ဘမ်ကို ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကတည်းက A Korean Odyssey, Room No. 9,Her Private Life, နဲ့ Arthdal Chronicles ဒရမ်မာကားတွေမှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
YG Entertainment ကေန ထြက္ခြာသြားေတာ့မယ့္အေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ‘ဝမ္း’ (ေဂ်ာင္ေဂ်ဝန္)
Her Private Life ဒရမ္မာကားမွာ နာမည္ႀကီး အဆိုေတာ္ တစ္ေယာက္အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေကာင္ေခ်ာေခ်ာေလးကို မွတ္မိၾကမွာပါေနာ္။ သူ႔ကို အမ်ားက ‘ဝမ္း’လို႔သိၾကပါတယ္။ Jung Jae Won ဆိုတဲ့ နာမည္အရင္းျဖင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေလာကကို ဝင္လာတဲ့ ‘ဝမ္း’ဟာ သူ႔ရဲ႕ ‘Goodbye Summer ‘႐ုပ္ရွင္ကား ပ႐ိုမိုးရွင္းအတြက္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ YG Entertainmen ကေန ထြက္ခြာသြားေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
အင္တာဗ်ဴးစဥ္မွာ YG Entertainmen ကေန ထြက္ခြာမယ့္အေၾကာင္းကို ယခုလို အေသးစိတ္ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။
” ‘Her Private Life’ ဒရမ္မာကားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ YG Entertainment ႏွင့္အတူ ကြၽန္ေတာ္ လမ္းခြဲခဲ့ပါတယ္။ YG ကိုပူးေပါင္းခဲ့တုန္းက ကြၽန္ေတာ္ ကိုယ္ပိုင္ဂီတအေပၚမွာပဲ အာ႐ုံစိုက္ခ်င္ခဲ့တာပါ။ လူေတြအမ်ားႀကီးကို ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ဂီတေတြ မွ်ေဝႏိုင္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ထင္ခဲ့မိတာပါ။ အိမ္မွာတစ္ေယာက္တည္း ဂီတဖန္တီးရင္ ျဖန္႔ခ်ီဖို႔ဆိုတာ ခက္ခဲပါတယ္။
ခုခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္ဂီတအေပၚကိုပဲ အာ႐ုံစိုက္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့ ျဖန္႔ခ်ီမလဲ ဆိုတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တိတိက်က် အေျဖမေပးႏိုင္ေသးပါဘူး။ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ဂီတအေပၚ အလုပ္လုပ္သြားမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ရည္မွန္းခ်က္က ဒီႏွစ္မွာ ျဖန္႔ခ်ိဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္”လို႔ ဝမ္းက ေျပာပါတယ္။
ဝမ္းဟာ သူ႔ရဲ႕ ဂီတအသစ္ကို ျဖန္႔ခ်ိတဲ့အခါ အကူအညီျဖစ္ဖို႔ ကိုယ္ပိုင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေအဂ်င္စီေထာင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ဝမ္းဟာ YG Entertainment ႏွင့္ ပူးေပါင္းကတည္းက သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ပ႐ိုမိုးရွင္းလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ 2017 ဇူလိုင္မွာ တစ္ကိုယ္ေတာ္ အယ္လ္ဘမ္ကို ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီကတည္းက A Korean Odyssey, Room No. 9,Her Private Life, နဲ႔ Arthdal Chronicles ဒရမ္မာကားေတြမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
Previous articleGym မသွားချင်တဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် တစ်ကိုယ်လုံးကို ထိရောက်မှုရှိစေမယ့် မိနစ် ၂၀ စာ Full Body Workout
Next articleအင်တာနက်သုံးသူတွေ ရွေးချယ်ထားတဲ့ အသက်ငယ်ငယ်နှင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝသူ ကိုရီးယား အမျိုးသမီးဆယ်လီ (၁၀)ဦး
လက်ထပ်ကြတော့မယ့် မင်းသမီး Shin So Yul နှင့် အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် Kim Ji Chul
၉၀ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်က လူအများစု အားကျခဲ့ရတဲ့ အထင်ကရ စုံတွဲများ